Ajụjụ Ọnụ: Olee otú Canada si? site na Canada - 1aviagem.com
Gara aga post: Gịnị ka m ga-eme ruo mgbe ntuli aka ndị Brazil?
Nkwupụta ozo: Belarus maka nwa amaala Belarus
Edebere 31 October 2018 site Römulo Lucena
Taa, anyị ga-ekwukwa banyere Canada mba a dị ukwuu nke North America.
Oge a dị ka nwa amaala Canada.
Kedu ka anyị si mara ibe anyị?
M zutere Andy na Finland n'oge njem site na Russia na mba ndị agbata obi.
Ọ bụ onye mụ na ya bi n'oge njem ahụ. Anyị na ndị netwọk mmekọrịta na-ejikọta kemgbe ahụ.
Mụ na enyi mụ na Canada na-akparịta ụka taa, ga-agwa anyị ntakịrị banyere Canada, mba nke abụọ kachasị elu n'ụwa, nke abụọ naanị na Russia.
Iji kwado ndị na-agụ blog a, mgbe m na-ekwu ederede ga-acha ọcha. Mgbe Andy ederede ga-acha uhie uhie.
1- Ya mere Andy, olee ebe amụrụ gị na ebee ka ị bi taa?
"A mụrụ m na St John, isi obodo Newfoundland na Labrador. M ka na-ebi ebe a, na nso nso nke dị nso na etiti.
2 - Gini bu oru gi?
"Abụ m onyeisi ndị isi nke ụgbọ mmiri na-aga n'etiti United States na Canada.
3 - Gini bu ihe kachasi ike nke i huru? (Nwere ike ịbanye n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'elu ala).
"Ụfọdụ oké osimiri na ọbụna ọkụ na ụgbọ mmiri."
4- Kedu ihe kacha amasị gị na Canada?
- Ọ bụ mba dị nnọọ nchebe ma dị jụụ.
5- Gini ka ị ga-agbanwe ebe ahu ma oburu na i nwere ike?
- Ihu igwe oyi na ụtụ isi dị elu.
6 - N'ikwu banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, m gụrụ na Canada nwere ọchịchị 3. Ọ bụ ihe dị ka: Ọ nwere eze (Ọ ga-abụ na eze Elizabeth Elisabeth II, nke United Kingdom, bụ eze). Nakwa onyeisi oche, ma ọ bụ gọvanọ, nakwa n'ikpeazụ onye praịm minista. Lee, ihe a nile n'otu mba! Ma ọ bụ eziokwu? Ha na-arụ ezigbo ọrụ? Kedu ihe ị ghọtara?
- Ee, ozi ahụ ziri ezi. N'adịghị ka Brazil ma ọ bụ United States, eze nwanyị ahụ bụ isi nke steeti na praịm minista bụ isi nke ọchịchị. Ọchịchị anyị yiri nke Australia. Onye minista anyị bụ Justin Trudeau. Ana m eche na ọ na-arụ ezi ọrụ. O doro anya na e nwere ihe dị na gọọmenti na ekwenyeere m na ekwenyeghi. Dịka ọmụmaatụ, ụtụ isi dị elu na afọ ndị na-adịbeghị anya, nke bụ ihe m na-ekwenyeghị na gọọmentị, mana nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mma ebe a, nke m kwenyere na echere m na ọ dị ezigbo mkpa ịnọgide na-enwe.
7- Gini ka ị ga-agwa onye njem njem ka o mee ma ọ bụ gaa na Kanada?
- Niagara Falls! Ọ bụ mmasị kachasị mma na mba ahụ. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya. My agwaetiti Newfoundland dịkwa mma ileta na August. E nwere ọtụtụ ememe n'oge a. Ma ọ bụ naanị ọnwa ole na ole mgbe ihu igwe dị mma. N'oge oyi, akụkọ ahụ dị iche.
8 - Olee otu njikọ dị n'etiti United States na Canada? Hà dị ka mba ndị nwanyị ma ọ bụ na ha nwere ọdịiche? M na-ajụ nke a n'ihi na ị na-anụ ọtụtụ ihe gbasara Mexico na United States. Ya mere enwere m ọchịchọ ịmara otú ha si emeso ndị Canada na-emeso ha nke ọma.
"Ana m agafe na United States ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa na azụmahịa, na n'oge ndị ọzọ maka ịṅụrị ọṅụ, enwebeghị m nsogbu ọ bụla na ókèala. Mgbe anyị na-eme njem na United States site na ọdụ ụgbọ elu Canada, anyị wepụtara US Customs na Border Patrol tupu anyị ahapụ Canada, yabụ mgbe anyị na-abanye na United States, ọ dịghị mkpa ka anyị hụ onye ọ bụla ka o nyefee ikike. Ọ dị ezigbo mfe. Mba anyị nwere njikọ chiri anya ma dị iche iche n'ụdị gọọmentị, echiche na akụkụ ndị ọzọ.
9 - Ị gara Brazil? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka ị chere?
- O di nwute na abughi m Brazil, ma m na-eme atụmatụ na m ga-aga na 2 ma ọ bụ 3 afọ ọzọ. Ruo ogologo oge, m chọrọ ịga South America. Ugbu a, ugbua ka ụgbọ elu dị n'etiti Canada na South America.
10- Ọ dị mgbe ị nọ na mbufịt ma ọ bụ nwere ihe mberede na ụgbọ mmiri ahụ?
"O doro anya na ọ bụghị, ma enwere m oké ifufe na ebili mmiri nke 7 mita ma ọ bụ karịa. N'elu ụgbọ mmiri anyị na-ele anya na ihu igwe na nlezianya na ebe obibi na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ma ọ bụ na-eme ka ọ dị na ndagwurugwu a na-echere iji chere ka oké ifufe ahụ gafere.
11: Ị laghachiri Russia mgbe njem ahụ gasịrị?
- Ee, alaghachiri m. Anọ m na Moscow ugboro anọ. Echere m na ị nwere ike ịsị na enwere m ọgwụ. Agakwara m ụfọdụ mba ndị Soviet mbụ dịka: Ukraine, Belarus, Georgia na Kazakhstan. N'oge oyi a, m bu n'obi ileta Azerbaijan na Uzbekistan.
- Lee, ole mba ole na ole, echere m na nyocha ọzọ ga-eso onye bi na otu n'ime ha.
Na ebe a anyị kwụsịrị ajụjụ anyị taa!
- Daalụ maka ohere, ọ bụ ihe obi ụtọ ịza ajụjụ gị na isonye.
Echere m na ihe niile dị gị mma, enyi m.
Ana m ekele gị maka ikere òkè. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara mba site n'echiche nke nwa amaala obodo.
Enwere m ohere ịhapụ njikọ na Niagara, ebe ọ bụ na onye anyị na-agba ajụjụ kwuru, ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike ịma ntakịrị obodo a:
Nnukwu aka Andy. Daalụ!
(Iji hụ ihe ndị ọzọ dị ka ibe a na map ụwa n'okpuru ebe a).
Ajụjụ ọnụ 1aviagem Belarus Canada Canada waterfalls cidade Elisabeth II Ajụjụ ọnụ USA ala oyi Justin Trudeau labrador map ụwa navio Newfoundland Niagara Russia onye njem nleta